Ndị isi Nauru na Palau bịanyere aka na ASA, ohere njem ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Nauru Nauru » Ndị isi Nauru na Palau bịanyere aka na ASA, ohere njem ọhụrụ
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Nauru Nauru • News • Akụkọ na -agbasa na Palau • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nauru na Palau bụ mba abụọ nweere onwe ha na Oke Osimiri Pasifik.
N'ịrụkọ ọrụ ọnụ, ndị Nauru ga -enweta ohere dị mfe ọ bụghị naanị na Palau, kamakwa Taiwan na mpaghara ndị ọzọ na Pacific Ocean dịpụrụ adịpụ.
Ndị isi Nauru na Palau bịanyere aka na nkwekọrịta ọrụ ikuku (ASA) nke ga -ahụ mmalite njem n'etiti mba abụọ Micronesia na gafere, 2 Septemba.
The Onye isi ala Nauru Lionel Aingimea kwuru na mbinye aka nke nkwekọrịta ahụ na-anọchite anya mmekọrịta na ọbụbụenyi dị n'etiti Nauru na Palau, "kamakwa maka nnukwu mpaghara Micronesia."
“Ọ bụghị naanị na nkwekọrịta ọrụ ikuku ga -eme ka njikọ dị n'etiti mba agwaetiti anyị abụọ sie ike kamakwa ọ na -enye ohere ịbawanye uru akụ na ụba maka abamuru nke mba anyị.
Onye isi ala Aingimea kwuru, "Nauru gbara mbọ ịkwalite ọrụ ya na mpaghara ụgbọ njem mpaghara mpaghara, mpaghara na mba ụwa."
Onyeisi nke Palau, Surangel Whipps, Jr, kwuru na obodo ya na -atụ anya ụbọchị a ga -eweghachi ọrụ ikuku, na -echeta ihe medivac mere na 1987 mgbe ahụ, Air Nauru, zara oku a ka ọ rụọ ụgbọ elu si Palau gaa Manila.
“Dị ka obere agwaetiti na steeti oke osimiri kwuru, otu n'ime ihe… anyị ghọtara bụ, na -enweghị njikọ ndị a na mpụga ụwa, anyị nọpụrụ iche, na ọtụtụ oge anyị na -enwe obi ebere nke ndị ụgbọ elu na ụlọ ọrụ nwere ike ọdịmma ha nwere ike ọ gaghị adakọ na ọdịmma anyị, ”Onye isi ala Whipps kwuru.
Ọ gbakwụnyere na iguzobe ASA bụ ohere 'ịrụkọ ọrụ ọnụ dị ka ụmụnna Pacific' na ịhụ ụgbọ elu Nauru ka ọ bụrụ onye na -ebu nke ọma na ịkwalite ọrụ maka ndị mmadụ.
Ndị isi abụọ ahụ na -amata ohere onye ọ bụla nwere ike ịnye na njikọ Asia, ọdịda anyanwụ na ndịda.
Ka ọ dị ugbu a, Nauru na -eme atụmatụ ụlọ iji melite ọrụ ụgbọ elu mba na ọrụ njikọ ụgbọ mmiri.
A na-akwalite ọdụ ụgbọ mmiri Nauru iji mezuo ụkpụrụ mba ụwa ebe ụgbọ elu Nauru ụgbọ elu Boeing 737-700 na nso nso a ga-anabata oge ụgbọ elu dị ogologo, na-eru ebe ndị ọzọ.
A na -amalitekwa ọrụ nkwadebe iji maliteghachi ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu nke ga -ewusi nchekwa ụgbọ elu na nnabata na ọnọdụ Nauru maka ịbawanye ọrụ ụgbọ elu n'ime ọdịnihu.
Nkwekọrịta ahụ kwuru na Nauru na Palau na -echeta njikọ chiri anya na -ejikọ mba abụọ a, na ọchịchọ ha ịnye usoro maka omume nke ọrụ ikuku.
Mba abụọ a makwaara ọrụ dị mkpa nke njem ụgbọ elu mba ofesi na mmepe mmepe akụ na ụba agwaetiti, ọkachasị site n'ịkwalite azụmaahịa, azụmahịa na njem.
Mba abụọ a makwaara na ọ dị mkpa ịkwalite ọkwa, ogo na arụmọrụ nke ọrụ ụgbọ elu n'ime na karịa obodo ha.
Onye isi ala Aingimea kwupụtara ekele sitere n'obi nye Onye isi ala Whipps n'aha gọọmentị maka ụgbọ elu ebere ebere na nso nso a na -eburu ndị ọrịa Nauruan 34 na ndị njem si Nauru gaa Taiwan nwere atụmatụ nhazi atụmatụ na steeti Yap maka ịgbanye mmanụ.
Nsogbu na ịmị mmanụ pụtara na ndị ọrụ ụgbọ elu na ndị njem chọrọ abalị, na Palau, ebe enyere ya ebe obibi na ihe chọrọ ụgbọ elu, kpochapụrụ ụgbọ elu ahụ na ndị njem COVID-ya gbara ọgwụ ka ha rute wee hie ụra, tupu njem ha gaa Taiwan.
Ịlanahụ ọrịa kansa akpa ume abawanyela
Ụgbọ elu Turkish na Belavia agaghị efe efe Iraq ọzọ…